YEYINTNGE(CANADA): Monday, May 14
နာတာရှည်ရောဂါသည်လို ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခမျိုး
ရွှေကို မလို၊ ရေကိုသာ လိုပါ၏
သုံးခွမြို့နယ်အတွင်း သောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်ရှိသော ကျေးရွာများ
မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ ကျေးရွာများသို့ စေတနာပန်းခင်း ရေအလှူတော် မှတ်တမ်း အကျဉ်း(ပထမ အကြိမ်)
by Tay Ling on Monday, May 14, 2012 at 8:24am ·
နံနက် 6:00နာရီ ထော်လီဂွေ့မှာ အစာပြေ စားကြပြီး ကားထွက်ကြသည်၊ အဖွဲ့ဝင်များကတော့ စေတနာပန်းခင်းမှ ဘုန်းဘုန်း အပါအ၀င် နှစ်ပါး..သုံးယောက်နဲ့...လုပ်အားဒါန ပြုကြသော ကိုဝင်းသူနိုင် နှင့် သငယ်ချင်းများ True donation မှ9ဦး၊ စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် 14 ဦးပါ။
သုံးခွသို့ ရောက်ကြသည်၊ ရေဘူးကြီး အစကနဦး အစီစဉ်မှာ လေးရာ စီစဉ်ထားသော်လည်း လိုအပ်ချက် အရ တိုးတိုးရင်း တိုးရင်းနဲ့ပဲ စုစုပေါင်း ရေဘူးကြီး ၆၀၀ ဖြစ်သွားပါတယ်၊ လာကတန်ဘိုး=နှစ်သိန်း တစ်သောင်းပါ။ လယ်ထွန်စက် ကားကြီ3းစီး ငှားရပါတယ်။
နေ့လည်ဆွမ်း၊ နေ့လည် စာများ အဆင်ပြေသလို စားကြ၍ ခရီးဆက်ထွက်ကြသည်၊ လိုက်ပါ လုပ်အားပေးကြသော လူငယ်လေးများ လမ်းဘေးမှာပဲ ထမင်းဘူးနှင့် စားကြရသည်၊ ရေသယ်ရသည့် အလုပ်လည်း အလွန်ပင်ပန်းပါသည်၊ ပထမ ရေသန့်ဘူးကြီးများဝယ်၊ ထို့နောက်...ထိုဘူးထဲမှ ရေးများအား ကားပေါ်မှ ကော်ရေတိုင်ကီ အကြီးများထဲသို့ လှယ်ထဲ့ရပါသည်၊ (ထိုသို့ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်အား ဒါန ပြုကြသော True donation မှ လူငယ်လေးများနှင့် သုံးခွမြို့နယ် NLD ပါတီဝင်များအား အထူးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း...)
မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ မှ ရွာတစ်ရွာဖြစ်သော က၀ ကျေးရွာသို့ေ၇ာက်၍ ရေဘူး ၂၅၀ အားလှူဒါန်းသည်။
ထိုရွာမှ သက်တော် ၈၀ ရှီပြီဖြစ်သော ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးအား သွားရောက် ကန်တော့၍ ၀တ္ထုငွေ ငါးထောင် လှူဒါန်းသည် ဆရာတော်ကြီးက လက်မခံချင်ပါ၊(အလွန်ရောင့်ရဲပြီး သီလ၊ သမာဓိနှင့် ပြည့်စုံသော ဆရာတော်ကြီးပါ၊ သွားရောက် ဖူးမြှော်စဉ် တရားထိုင်နေ၍ စောင့်ဆိုင်းနေသေးသည်) ထို့နောက် ကလေးများအား ချိုချဉ်ဝေ၊ ထူးထူးခြားခြားလေး တစ်ခုကတော့ ထိုရွာမှ အသက်ကိုးဆယ်ကျော် အဘွားအို တစ်ဦးကို တွေ့ရသည်၊ အဘွားမှာ အပျိုကြီး ဖြစ်ပါသည် ၊တစ်ယောက်တည်း နေရသည်၊ ထမင်းကိုတော့ ဆရာတော်ကြီးမှ ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ကို လွှတ်၍ ကျွေးမွေးပါသည်၊ အလင်းအ်ိမ် ဘုန်းဘုန်းမှ အလှူငွေ ငါးထောင် လှူဒါန်းသော အခါ လေးထောင် ကို ပြန်ပြီး လှူနေတဲ့ အတွက် မနည်းပြောပြီး အတင်းပေးခဲ့ရသည်၊ ထိုကျောင်းသားလေး၏ ပြောပြချက်အရ...အဘွားက သူများ လှူသမျှအား စုစုပြီး ကျေးဇူးရှင် ဆရာတော်ကြီးအား ပြန်လည်၍ လှူဒါန်းသည်ဟု သိရပါသည်၊ ရင်နာစရာကောင်းတာကတော့ ထိုအဘွားစုဆောင်းထားသော အလှူငွေလေးများအား ခိုးယူ သုံးစွဲမှုများလည်း ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အဘွား ခု လှူတဲ့ အလှူငွေတွေကို သူများမခိုးအောင် ဘယ်လို သိမ်းမလဲဆိုတော့ တစ်နေရာ တစ်ထောင်စီ ခွဲပြီး သိမ်းထားမယ်တဲ့...လေ။
က၀ ကျေးရွာမှ ရေလှူခြင်း ကိစ္စပြီးဆုံးသော အခါ ဆက်လက်၍ ခရီးထွက်ကြသည်၊ ဒုတိယမြောက်ရောက်သော ကျေးရွာမှာ ပင်လယ်ပြင်နားမှာ ရွာတည်ထားသော အောင်သာတန်းဆိုသော တံငှါ ရွာလေး တစ်ရွာဖြစ်သည်၊ ထိုကျေးရွာလေး၏ နောက်မှာတော့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးပဲ ရှိပါတော့သည်၊ ထိုရွာမှ ညဘက်များဆိုလျှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ကြီးမှ မီးရောင်များကိုပင် လှမ်း၍ ဖူးမြင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်၊ (ထိုပင်လယ်ပြီး အရောက်မှာတော့ မောသမျှ အပန်းပြေ၍ ရင်ထဲ အေးချမ်းရသည်၊ ပါလာသော လူငယ်လေးများ ပယ်လင်ပြင်ထဲ ဆင်း၍ ပျော်ကြသည်၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြသည်၊ သူတို့လည်း အလွန်ပင်ပန်းကြသည်)
အောင်သာတန်း ကျေးရွာမှ အထွက်မှာတော့ မိုးချုပ်ပါပြီ၊ ထို့နောက် ထွန်းစိန်ရွာသို့ အရောက်မှာတော့ ဘုန်းဘုန်းတို့ ကားမှာ ရေကုန်သွား၍ လှည့်ပြန်ခဲ့ရသည်၊ ရေပုံးလေးတွေ ကိုင်ပြီး သောက်ရေ မရပဲ ပြန်သွားရရှာသော ကလေးများ ကို မကြည့်ရက်တော့၊ မျက်နှာလွှဲပြီး ပြန်ခဲ့ရသည်။
ခန့်မှာတော့ ဘုန်းဘုန်းတို့နဲ့ အလှမ်းကွာမှရောက်လာသော ဘုန်းဘုန်းတို့ လှူဒါန်းထားသော ထော်လာဂျီ တစ်စီးမှ ရေဘူး တစ်ရာကျော်အား အောပန်းစိန်ရွာမှာ နောက်ဆုံး လှူဒါန်းခဲ့သည်၊ ထိုရွာမှ လူငယ်လေးများ စားဘို့ရန် အိမ်သားများ စားဘို့ ကြော်ထားသော ကြက်ဥကြော်များအား ကြွပ်ကြွပ် အိတ်နှင့် ထည့်၍ ပေးလိုက်ပါသည်၊ အောင်ပန်းစိန်ကျေးရွာ အပြီးမှာတော့ ထော်လာဂျီ သုံစီး ရှေ့နောက် တန်း၍ ပြန်ခဲ့ကြသည်၊ ဒီခရီး စဉ် ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကတော့ ပြောမယုံကြုံဖူးမှ သိပါမည်၊ သို့သော်လည်း ပင်ပန်းရကျိုးနပ်၍ အလွန်ထူးမြတ်သော ကုသိုလ်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ငွေအား ဒါနတင်မကပဲ လုပ်အား ဒါနပါ ပြုစေချင်ပါသည်၊
သုံးခွသို့ ရောက်သည်၊ ကျောင်းသို့ ၁၁ ကျော်ကျော်မှာ ရောက်၍ ရေချိုးပြီး (ရေမချိုးလို့ မရဘူး၊ ကိုယ်မှာ ဆားပွင့်နေပြီ)ကျိန်းစက်လိုက်ရာ မနက် ၈ နာရီမှ နိုးပါတော့သည်၊ နိုးနိုးချင်း မျက်နှစ်သစ်၍ မနားနိုင်သေးပပါ၊ မယ်တော်ကြီးကို ကြည့်ဘို့နဲ့ စာကြည့်တိုက်လေး အချောသတ်ရန် 14.5.12 ဒီမနက်မှာပဲ မနားနိုင်ပဲ အဝေးပြေးကွင်းကို သွား၊ လက်မှတ်ဖြတ်၍ ခုတော့ ဇလွန်ကို ရောက်နေပါပြီ...အလှူရှင်များ စိတ်အားထက်သန်မည်ဆိုပါက ထပ်မံ၍ ရေလှူခရီးစဉ်များ ရေရှည်စီမံကိန်းများ အကောငထည်ဖော်ပါဦးမည်...။
မှတ်ချက်။ ။ မှတ်ချက် သုံးခွမြို့နယ် NLD ပါတီမှ ကားငှားခြင်း ကိစ္စများ၊ ရေ၀ယ်ခြင်း ကိစ္စများနှင့် ရေလှူသွားရောက်သော ပယ်လယ်ကွေ့ကျေးရွာများအထိ ခရီးစဉ် အစမှ အဆုံးတိုင် ပင်ပင်ပန်းပန်း လိုက်ပါ၊ ကူညီကြပါသည်၊ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပါသည်၊ ဘုန်းဘုန်းတို့ အဖွဲ့တင်မဟုတ်၊ ရေလှူလာသော မည်သူမဆိုကို ကူညီကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာဖြင့်...ဘုန်းဘုန်း အလင်းအိမ် (14.5.12.. Z.L)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/14/20120အကြံပြုခြင်း
မြန်မာဟိုတယ် ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးနှင့် ဂျပန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တို့အမှု တရားရုံး ပြောင်းစစ်
ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင် ဘုရားလမ်းနှင့် အနော်ရထာ လမ်းရှိ ယင်းဟိုတယ်တွင် တည်းခိုနေသူ ဂျပန်နိုင်ငံသားနှင့် မြန်မာ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး တို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံသားက အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အဖော်အဖြစ် ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီတွင် ဟိုတယ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဟိုတယ်စည်းကမ်းနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ပြောဆိုရာမှ ထိုဂျပန် အမျိုးသားက ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပါးရိုက်ခဲ့သဖြင့် ပုဇွန်တောင် ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ထား သကဲ့သို့ ယင်းဂျပန် အမျိုးသားကလည်း ဟိုတယ်အတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးမှုဖြင့် အပြန်အလှန် အမှုဖွင့်ကာ ပုဇွန်တောင် တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ အမှုရင်ဆိုင်နေရာမှ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးက ရုံးပြောင်းစစ်ရန် ခရိုင်တရားရုံးသို့ လျှောက်ထားချက်အရ ယခုမေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် တရားရုံးသို့ ပြောင်းရွေ့ အမှုရင်ဆိုင်ခွင့် ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် လုပ်သား မကျေနပ်မှု တင်ပြ
မေလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်- သူရမျိုး (YPI )
လုပ်ခ လစာငွေမလုံလောက်သည်ကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ တင်ပြရန် အတွက် လှိုင်သာယာမြို့နယ် စက်မှုဇုံ ၄ မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်လမ်းပေါ်ရှိ Jasmine(စပါယ်ပွင့်) အထည်စက်ရုံအလုပ်သမများ ယနေ့မနက်၉နာရီခန့်က စတင်စုရုံးခဲ့သည်။ ထိုသို့စုရုံးရခြင်းမှာ ဆန္ဒပြရန်မဟုတ်ဘဲ အလုပ်ရှင်နှင့်ညှိနှိုင်းရန် အလုပ်သမားရေးရာတာဝန်ရှိသူများကိုစောင့်စားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမများက ပြောသည်။
အဆိုပါစက်ရုံတွင် ပုဒ်ဖြတ်စားစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ရပြီး အထည်အော်ဒါရှိလျှင်ရှိသလို အလုပ်သမတစ်ဦးလျှင် တစ်လ ကျပ် ၁၅၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ၀န်းကျင်သာရသဖြင့် ပုံသေလစာရရှိရန် တောင်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် တစ်လလျှင် ခွင့်၂ရက်အပြင် တစ်လ ၂ရက် ၁၀မိနစ်ခန့်နောက်ကျခွင့်ရရှိရန်လည်း တောင်းဆိုသွားမည်ဟု အထည်ချုပ်အလုပ်သမ မခင်ဝေက YPI သို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ စံပါယ်ဖူး စက်ရုံအလုပ်သမ အခက်အခဲအားလှိုင်သာယာမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီနှင့် မြို့နယ်အလုပ်သမားရေးရာ တာဝန်ရှိသူများမှ အလုပ်ရှင်နှင်အလုပ်သမများကြား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးသွားမည်ဟု မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်သိန်းက ပြောသည်။ ။
မြရွှေဝါကုမ္ပဏီကို ဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်မည်ဟု ဒဂုံဆိပ်ကမ်းလယ်သမားများဆို
by Yangon Press International on Monday, May 14, 2012 at 10:24am ·
မေလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်-ကျော်စိုးလင်း (YPI)·
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ သန်လျင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သန်းဦးပိုင် မြရွှေဝါကုမ္ပဏီ၏ လယ်မြေသိမ်းယူခြင်းကိုခံထားရသော ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှ လယ်သမားများအနေဖြင့် ထိုကုမ္ပဏီအား ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းလယ်သမားများအရေး ဆောင်ရွက်နေသူက ပြောသည်။ ယင်းလယ်သမားများအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးမောင်မောင်က “ ခုအချိန်မှာ အချို့လယ်သမားတွေ လယ်စလုပ်နေပြီ။ ကုမ္ပဏီက အနှောင့်အယှက်ပေးလာရင် ဥပဒေကြောင်းအရ ဖြေရှင်းသွားမယ်။ဒီကိစ္စကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း တိုင်ထားတယ် ” ဟုပြောသည်။ လယ်သမားများဘက်မှ ဆောင်ရွက်သူ အခြားရှေ့နေဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်သိန်းကလည်း လယ်ယာမြေအမှုများမှာ တရားစွဲဆိုရန်အခွင့်အရေး နည်းပါးသော်လည်း လယ်သမားများပိုင် လယ်ယာမြေများအား ကုမ္ပဏီမှ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်လာပါက တရားရုံးမှတဆင့် တားဝရမ်း ထုတ်ပေးရန်အတွက် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ မြရွှေဝါကုမ္ပဏီဘက်မှလည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် လယ်ယာမြေများကို စတင် လုပ်ကိုင်တော့မည်ဖြစ်ပြီး နှောက်ယှက်ပါက ကာကွယ်ပေးရန်အတွက် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား ပြောကြားထားသည်ဟု လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးမောင်မြင့်ကပြောသည်။ “ သူတို့ဘက်က အာဏာသုံးပြီးလုပ်မယ့်ပုံစံရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့က လယ်သမားတွေဆိုတော့ သူတို့နဲ့ ငွေအားလည်းမယှဉ်နိုင်ဘူး။ ဥာဏ်အားလည်းမယှဉ်နိုင်ဘူး ” ဟု၎င်းကပြောသည်။ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ဓနိခြံ ၇၄၉ ဧကအား ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဝန်ကြီးဌာနမှ သိမ်းယူခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး ယင်းဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် မြရွှေဝါကုမ္ပဏီသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လယ်သမား များ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ မြရွှေဝါကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယခုလ ၁၁ ရက်နေ့က လယ်သမားများအား ခေါ်ယူ၍ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် လယ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့ ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် လျော်ကြေးအဖြစ် တစ်ဧကလျှင် ကျပ် နှစ်သိန်းခွဲရယူရန်ပြောခဲ့ကြောင်း ကျီစုရွာမှ လယ်သမားများက ဆိုသည်။ လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးမောင်မြင့်က “ ကျွန်တော်တို့က လျော်ကြေးလည်း မလိုချင်ဘူး။ အကျိုးတူလည်း မလုပ်ချင်ဘူး။ ကိုယ့်လယ်ပဲ ကိုပြန်လိုချင်တာ။ လယ်ကိုပဲ သံယောဇဉ်ရှိတယ်” ဟုပြောသည်။ လယ်မြေအသိမ်းခံရသော လယ်သမားများအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ တိုင်ကြားစာ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ပေးပို့တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ထူးခြားမှုမရှိသေးကြောင်း လယ်သမားများက ပြောသည်။
အဘမန်း… ဘာလဲ!!!! အဘမန်း… ဘယ်လဲ !!!!
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/14/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့နယ်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နဲ့ ဖွံဖြိုးရေး အခြေအနေတွေကို လေ့လာ
Published on May 14, 2012 by RFABurmeseVideo
အိမ်အတွင်း ၀င်ရောက် ပြီးမထွယ်အောင် အားထိုးကြိတ်
မန္တလေးမြို့ တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးဦးစန်းမောင် ၏ သားဖြစ်သူ ချိုသဲမောင် သည် ၃၁-၃-၂၀၁၂ နေ့ က နေ့ လည် ၁၁း၃၀ နာရီအချိန် တွင် ၆၆ x ၆၇ ကြား၊ ၃၈ x ၃၉ ကြား မဟာမြိုင် အပိုင်း(၁)၊ အကွက်(၅) မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့ နယ်တွင် နေထိုင်သော ကျွန်မ မထွယ်အောင် နေအိမ် အတွင်းရှိ နေစဉ် ကားနံပါတ် ၃၈/၉၉၄၆ စူပါ စလွန်းအဖြူရောင်ကားဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး မည်သည့် အကြောင်းမှပြောဆိုခြင်းမရှိပဲ ကျွန်မ၏ အင်္ကျီရင်ဘတ်အား ဆောင့်ဆွဲပြီး ထိုးကျိတ်ကန်ရိုက်နှက်ကာ ငါ့ကို ဘာကောင်မှတ်နေသလဲ ဘယ်ရုံးကိုတိုင်တိုင် စောက်ဂရုမစိုက်ဘူး တိုင်ချင်ရတိုင် နင့်ကိုငါသတ်ပစ်မယ်၊ ထိုးသတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် ကြိမ်းမောင်းပြောဆိုကာ ထွက်သွားပြီး ကားနားအရောက်တွင် သတ္တိရှိတဲ့ကောင်လာခဲ့ ဟုပြောဆိုကာ ကားမောင်းပြီးထွက်သွားပါသည်။
ကျွန်မ မထွယ်အောင်မှ ၂.၄.၂၀၁၂ နေ့ တွင် မန္တလေးမြို့အမှတ်(၉)ရဲ စခန်းသို့ သွား ရောက်အမှု့ ဖွင့်တိုင်းကြားခဲ့သော်လည်း ၅.၅.၂၀၁၂ နေ့ အထိ မည်သို့ မှ အကြောင်း ပြန်ကြားခြင်းမရှိသဖြင့် ရဲ စခန်းသို့ သွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းရာ တရားခံအား အဖမ်းပြပြီး အာမခံပေးလိုက်သည်ဟု သိရပါသည်။
ဤအမှု့ နှင့် ပါတ်သတ်၍ ကျွန်တော်တို့ အား အထက်မှဖိအားပေးနေသဖြင့် အမှု့ မှန် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အနှောက်အယှက်အဟန့် အတားဖြစ်နေ ပါသည်ဟုလည်း ကျွန်မတို့ အား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့ ကြောင့်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်အတွင်းရေးမှူးဦးစန်းမောင် ၏ သားဖြစ်သူသည် ဖခင်အာဏာကို အလွှဲသုံးစားပြုလျှက် မြို့ တော်နေ ပြည်သူမိန်း ခလေးတစ်ဦးအား နေအိမ်အတွင်းသို့ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ၀င်ရောက်ကာ ကာအိန္ဒြာပျက်ပျား စေခြင်း၊ ထိခိုက်နာကျင်စေခြင်း၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်ကာ ခြိမ်းခြောက်ကြိမ်းမောင်းသွားသည်ကို ထိရောက်မှန်ကန်စွာအရေးယူပေးပါရန် နှင့် အများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
မြန်မာဟိုတယ် ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးနှင့် ဂျပန် စီးပွား...
မြရွှေဝါကုမ္ပဏီကို ဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်မည်ဟု ဒဂုံဆိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့နယ်ပညာရေး၊ ကျန်းမာ...